Thomas Tuchel oo fariin digniin ah ee ku saabsan Neymar u diray maamulka kooxda PSG – Gool FM
(Paris) 19 Agoosto 2019. Tababaraha Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel ayaa fariin digniin ah u diray maamulka kooxda, kaddib markii ay soo baxeen warar ku saabsan inay iska fasaxyaan xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr suuqan xagaaga.
Thomas Tuchel ayaa ka soo hor muuqday shir jaraa’id kaddib guuldaradii 2-1 aheyd ay kala kulmeen kooxda Rennes kulan ka tirsanaa horyaalka FRANCE – LIGUE 1, wuxuuna kaga digay maamulka kooxda PSG inay iska lumiyaan adeega Neymar Jr iyagoo aan gacanta ku dhigin badalkiisa.
“Suurtogal maahan inaan lumino adeega Neymar Jr, anagoo aanan sameyni heshiis cusub ee badal u noqon kara isaga”.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa si cad u sheegay inuu doonayo ka tagista kooxda Paris Saint-Germain xagaagan.
Maamulka kooxda PSG ayaa durba u dhaqaaqay inay iska iibiyaan Neymar Jr, laakiin waxaa la joojiyay wadahadaladii ay la galeen mas’uuliyiinta Barcelona sababo dhaqaale awgood.
Neymar Jr ayaa doonaya inuu ku laabto kooxda Barca, halka saraakiisha PSG ay dalbanayaan lacago xoogan ama heshiis isdhaafsi oo aad u weyn isla markaana ay ku jiraan 3 ka mid ah xiddigaha naadiga reer Catalonia.